एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले यतिसम्म गरेको खुलासा, बज्यो खतराको घण्टी ! | Prahar News
एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले यतिसम्म गरेको खुलासा, बज्यो खतराको घण्टी !
काठमाडौँ – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछीरिङ शेर्पाका लागि खतराको घण्टी बजेको छ । शेर्पाले पदमा रहदा ठूलो अपराध गरेको खुलासा भएपछि उनीमाथि डण्डा चल्ने भएको हो । उनले नेपालमा आयोजना हुने फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै अनलाइन जुवा खेलाउन पाउने गरी सम्झौता गरेर ठूलो अपराध गरेका हुन् ।
एन्फाका अध्यक्ष शेर्पा